बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप आवश्यक नपर्ने हो ?
अहिले विश्वभर १८ वर्ष भन्दा माथिकालाई मात्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइएको छ । बालबालिकालाई खोप किन दिइएन भन्ने कुराको चासो आम अभिभावकमा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकी प्रमुख वैज्ञानिक डा.सोमिया स्वामिनाथेनले यस विषयमा राखेको विचार यहाँ समेटिएको छ ।
२०२१ को जुन महिनासम्मका आउँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले वालवालिकालाई खोप लगाउनु प्राथमिकता हैन भनेको छ किन ?
उनीहरूमा कोभिड संक्रमण हुने र अरुलाई सार्ने संभावना बढी भए पनि वयस्कको तुलनामा बालाबालिकामा रोगको गंभिर संक्रमण हुने संभावना एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले हामीले खोपको सिमित आपुर्ति भएको देशमा खोप सुरु गर्दा पहिले कसलाई खोप दिने भन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितको सम्पर्कमा आउने उच्च जोखिम भएका व्याक्तिबाट खोप लगाउन सुझाव दिएका हौं । साथै वृद्धवृद्धमा संक्रमणको उच्च जोखिम रहन्छ, ती समूहहरूमा खोप पुराउँ भनेका हौं ।
कोभिडबाट हुने मृत्युदर कम गर्न यसरी उमेरगत रुपमा जान हामीले सल्लाह दिएका हौं । बालबालिकामा अन्य गम्भिर खालका रोगछन् र कोभिडको संक्रमणको पनि जोखिम छ भने त्यस्तो अवस्थामा बालबालिका पनि खोपको लागि योग्य हु्नसक्छन् , खोप उपलब्ध भएपछि यो अवस्थाका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । तर समूहका हिसावले हेर्दा बालबालिका धेरै न्युन प्राथमिकताको समूह हो ।
त्यसो भए विश्व स्वास्थ्य संगठने भविश्यमा खोप लगाउने सुझाव दिनसक्छ ? त्यस्तो भए कहिलेसम्म खोपको सुझाव आउनसक्छ ?
खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले अहिले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहको लागि खोपको विकाुस गर्ने र त्यस पछि क्रमिक रुपमा कम उमेरमा जाने कुराको अध्ययन गरिरहेकाछन् ।
त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउने वित्तिकै विज्ञहरूको रणनैतिक समूहले विश्व स्वास्थ्य संगठनको खोप कार्यक्रम सम्बन्धि नीति निर्माण गर्छ र विश्वका धेरै देशले त्यसलाई अवलम्बन गर्नेछन् । विशेषज्ञको यो रणनैतिक समूहले तथ्यांक आउने वित्तिकै बालबालिका मा खोपको प्रयोग कसरी गर्ने, कति मात्रा दिने, कति अन्तरालमा दिने साथै कुनै सुरक्षित सावधानी र प्रतिकुलताका विषयमा विस्तृत रुपमा सुझाव प्रदान गरिनेछ ।
अहिले प्राथमिकतामा नराख्नुको कारण खोपको सिमितता र उच्च जोखिम भएकाहरूको लागि खोप पुराउनु नै मुख्य कारण हो । बालबालिकालाई विद्यालय जानुभन्दा अगाडि खोप लगाउन जरुरी छैन ।
विश्वका धेरै देशमा विद्यालय संचालन भइरहेकाछन् । विद्यालयमा काम गर्ने वयस्कलाई खोप लगाइएको र समूदायमा रहेका वयस्कलाई खोप दिन सुरु गरिएकोले संक्रमण घट्दै गएमा र सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गरिएको अवस्थामा विद्यालय पुनः संचालन गर्न सकिन्छ ।
यी खोप सुरक्षित छन् भनेर हामी कसरी ढुक्क हुनसक्छौं ?
खोपको सुरक्षालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले धेरैनै महत्व दिन्छ । खोेपको सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रोमा विश्वव्यापी सल्लाहाकार समिति नै छ । विश्वभरी प्रयोग भएका खोपको सुरक्षाको सूचकको अनुगमन गरि उनीहरुले आवश्यक ठानेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सुझाव दिने गरिन्छ ।
अर्कोतिर खोपको पू्रभावकारिता जाँच गर्न पहिला चिकित्सकीय परिक्षण गरिन्छ । अहिले बालबालिको सन्दर्भका पनि त्यही भइरहेको छ । खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छन् । साथै खोपको कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बालबालिकामा सबै खोपको परिक्षण भइरहेको छ ।
यो परिक्षणले बालबालिका खोप लगाउँदा निरन्तर अनुगमन गर्न आधार तय हुन्छ । हामीले खोप लगाउन सुरु गरेसँगै यसको सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा पनि सुरु देखिनै चासो देखाएका हुन्छौं ।
– स्रोत डब्लुएचओ
८ असार २०७८ ०८:३४